အကောင်းဆုံး ICO စာရင်း ၂၀၂၁ | ICO သတိပေးချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစာရင်း ICO စာရင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ICO Listing Online - ၂၀၂၁ တွင်နံပါတ် ၁ ICO စာရင်းပလက်ဖောင်း
ICO Listing Online သည်တစ်ခုဖြစ်သည် အကောင်းဆုံး ၂၀၂၁ ICO စာရင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကောင်းဆုံး ICO များအကြောင်းကိုပုံမှန်သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ သင်၏ ICO ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့တင်ပြလိုပါက the ကိုနှိပ်ပါ ICO ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော:
၂၀၂၁ တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကောင်းဆုံး ICO များ - ထိပ်ဆုံး ICO စာရင်း ၂၀၂၁
တက်ကြွသော ICO များ
Solidus Technologies ကို Ethereum သတ္တုတူးဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ Solidus Ai Tech ကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ Solidus သည် ၎င်းတို့၏ Eco Friendly High Performance Computing (HPC) Data Center & Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ပလပ်ဖောင်း၏ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုကို အပြီးသတ်ပြီး အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ Megacorps၊ SMEs နှင့် Professionals များသည် Artificial Intelligence ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ချောမွေ့စွာ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး AI utility token (AITECH)။ နိုဝင်ဘာလ 18, 2021 ဧပြီလ 30, 2022 9.9
Quarashi သည်ပထမ ဦး ဆုံးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောအရာများဖြစ်သော Privacy Chat, Decentralized Exchange, IDO Launchpad, Blockchain Interfaced Multi Crypto ပိုက်ဆံအိတ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2022 မတ်လ 15, 2022 9.9
RastaSwap သည် အသိုက်အဝန်း မောင်းနှင်သည့် ပရောဂျက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား နံပါတ် ၁ Crypto Cannabis ဂေဟစနစ်နှင့် ရိုးရာစတော့စျေးကွက်နှင့် crypto တို့ကြား ပေါင်းကူးတစ်ခုအဖြစ် တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2021 မတ်လ 1, 2022 9.4
Revenue Coin (RVC) ကိုင်ဆောင်သူများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရန်ပုံငွေရရှိသော Startups များသည် ၀ င်ငွေ၏ ၁၀% ကိုစျေးကွက်မှစနစ်တကျ ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ရောင်းလိုအားနှင့်တန်ဖိုးကိုမြင့်တက်စေသည်။ အောက်တိုဘာလ 15, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2021 9.8
YearnNFT Finance သည် NFT များကို mint နှင့် ရောင်းဝယ်ရန်အတွက် BSC အခြေခံ NFT Marketplace တစ်ခုဖြစ်သည်။ YFNFT သည် ထောက်ပံ့မှုနည်းသော BSC အခြေပြု မူရင်းတိုကင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလ 19, 2021 ဧပြီလ 30, 2022 9.1
BERTINITY သည်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုနှင့်အပြည့်အ ၀ အမည်မသိနှင့် No KYC ငွေကြေး blockchain ဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်။ BERTINITY ဂေဟစနစ်တွင် crypto ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဗဟိုလဲလှယ်မှု၊ ICO Launchpad၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံခြုံရေးတိုကင်စတော့စျေးကွက်နှင့်ဇာတိအကြွေစေ့တို့အပါအ ၀ င်အဓိကအစိတ်အပိုင်း ၅ ခုပါ ၀ င်သည်။ အောက်တိုဘာလ 20, 2021 ဇန်နဝါရီလ 17, 2022 9.2
Blockchain-Based Platform တွင် All-in-one တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2022 ဧပြီလ 30, 2022 9.6
Pawā သည် Multifunctional Utility Token တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စက်ကိရိယာပိုင်ရှင်များနှင့် ASIC စက်ကို မ၀ယ်ရသေးသူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်ခွင့်များကို ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် HashEX နှင့် BeMine staking protocol ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းလည်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလ 8, 2021 ဇန်နဝါရီလ 31, 2022 9.5
AgroDeal Lab သည် တောင်သူလယ်သမားများအား စျေးကွက်၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ကိရိယာများနှင့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် Blockchain စိုက်ပျိုးရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ 1, 2022 မေလ 31, 2022 9.2
Polygon Earning Platform
ကျွန်ုပ်တို့သည် polygon (matic) network တွင် (p2e) crypto ဂိမ်းများရရှိရန် ကစားခြင်းကို ဖော်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း nft marketing နှင့် stake matic ကို စတင်လိုက်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ 15, 2022 ဇန်နဝါရီလ 22, 2022 9.2
Frodo Tech သည် ဘဏ္ဍာရေး blockchain ဂေဟစနစ်ဖြစ်ပြီး New Zealand Blockchain Association (BANZ) ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား လူမျိုး သို့မဟုတ် ဒေသကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ certik မှစစ်ဆေးသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 9.8
MyCryptoCity သည် Solana အခြေခံအဆောက်အအုံကို အသုံးပြုထားသည့် မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ MyCryptoCity သည် ကစားသမားများအား Solana အခြေခံအဆောက်အအုံကို အသုံးပြု၍ MYCTY တိုကင်များရရှိစေမည့် သရုပ်ဖော်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားသမားသည် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြုလုပ်သည်။ ကစားသမားခေါ်ယူမှု၊ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု၊ အပေးအယူများ၊ မြို့စီမံခန့်ခွဲမှုစသည့် ရွေးချယ်စရာများစွာကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရန် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ကစားသမားသည် မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်စေသည်။ ဆုအဖြစ် MYCTY တိုကင်ကို ရရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 ဇန်နဝါရီလ 26, 2022 9.0
အမြန်ဆုံး စမတ်ကျသော စာချုပ်များ ပလပ်ဖောင်း။ Cheetah ပရိုတိုကောသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် 110000+ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခကြေးငွေနည်းပါးသော စမတ်ကန်ထရိုက် blockchain ပလပ်ဖောင်းကို တည်ဆောက်နေသည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2022 မတ်လ 1, 2022 9.1
Lucrosus Capital သည် ၎င်း၏ တိုကင် - $LUCA မှတဆင့် တစ်ဦးချင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ပေးဆောင်သည့် Decentralized Venture Capital ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ 17, 2022 ဧပြီလ 17, 2022 9.3
Brickken သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လက္ခဏာသက်သေပြရန် ခွင့်ပြုသော blockchain အခြေခံ တိုကင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် passive ၀င်ငွေရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများကို ပေးဆောင်သည်။ စက်တင်ဘာလ 1, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2022 9.2
Veritise သည်ကုမ္ပဏီများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အတည်ပြုခြင်း၊ သက်သေခံခြင်း၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အဓိကမှာ Veritise Enterprise-grade blockchain ဖြစ်ပြီးဒေတာများကိုလုံလုံခြုံခြုံနှင့်မပြောင်းလဲဘဲသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ 3, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2021 9.8
BSC (Binance Smart Chain) တွင် သီးသန့်ရောင်းချခွင့်ရှိသော ပထမဆုံး IDO နှင့် IGO Launchpad သည် နိမ့်ပါးသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပရောဂျက်များအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ 1, 2022 ဇန်နဝါရီလ 31, 2022 9.1
“VGT” (Vingt) တိုကင်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော ဘဏ္ဍာရေး (“DeFi”) ဂေဟစနစ် ဖန်တီးမှုဆီသို့ ဦးတည်ပြီး လက်ရှိ DeFi နေရာကို ကွက်လပ်များ ဖြည့်သွင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဇန်နဝါရီလ 1, 2022 ဧပြီလ 30, 2022 9.6
ANB သို့မဟုတ် Access Next Blockchain သည် Layer2IBFT Protocol နှင့် Bonsai Tries Data Architecture ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ 5, 2022 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2022 9.1
Bamonyo သည် စမတ်ကျသော အိမ်ငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဟိုတယ်ကွင်းဆက်ပရောဂျက်၏ cryptocurrency ဖြစ်သည်။ အသုံးဝင်သော တိုကင် Bamonyo သည် 10,000 ခုနှစ်မှ စတင်တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသော ဟိုတယ် 2022 ၏ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ရယူရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါမည်။ နိုဝင်ဘာလ 1, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2022 9.6
Ownex (ကိုယ်ပိုင်) သည် Binance blockchain ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော crypto တိုကင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်း ownex 500 (ကိုယ်ပိုင်) တိုကင်ပိုင်ရှင်များသည် ownex.io အမြတ်အစွန်းများ၏ 60% ထံမှ အမြတ်ဝေစုများကို ၎င်းတို့၏အမှတ်အလိုက် ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ 17, 2021 ဧပြီလ 30, 2022 9
GHA ဂေဟစနစ်တွင် တိကျသောလယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း၊ လယ်ယာမြေမြေပုံထုတ်ခြင်း၊ IoT အာရုံခံကိရိယာများ၊ ဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ၊ တည်နေရာအသိဥာဏ်၊ သီးနှံစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ဖြန့်ဝေထားသောစာရင်းဇယားနည်းပညာ (DLT) နှင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် blockchain စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ဖြင့် အခြားသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ပါဝင်သည်။ ကောက်ရိုးစိုက်ပျိုးရေး ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ထိရောက်မှု၊ ပွင့်လင်းမှုနှင့် ယုံကြည်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထူးခြားသော အလားအလာရှိသည်။ အောက်တိုဘာလ 26, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2021 9.7
KIND တိုကင်သည်စိန်များကိုအွန်လိုင်းမှရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်တူအောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်သမိုင်းသင်္ကေတဖြစ်သည်။ ဤသင်္ကေတကိုဖန်တီးရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ kohinoor စိန်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့လောကမှာတိုကင်ပုံစံနဲ့သူတို့အများကြီးရှိတယ်။ လူတွေအားလုံးကဒီအဖိုးတန်စိန်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာအများကြီးသိမ်းထားနိုင်တယ်။ အောက်တိုဘာလ 20, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2021 9.4
Epsilon သည်လူထုမောင်းနှင်သော၊ လူသိရှင်ကြားလုံခြုံသော၊ ပွင့်လင်းသော search engine တစ်ခုဖြစ်သည်။ Epsilon တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောလဲလှယ်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် Binance Smart Chain ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လည်ပတ်ပြီး BEP-20 တိုကင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ 4, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2021 9.5
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ လူတစ်ဦး၏ တွေးခေါ်ပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘဝအစီအစဉ်ကို ပြောင်းလဲရန်၊ သက်တမ်းတိုးရန်၊ အသက်ကြီးလာချိန်တွင် ဘဝအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2021 7.5
Dhabicoin သည်သုံးစွဲသူများအားဆက်သွယ်ရန်၊ သင်ယူရန်၊ ငွေပေးချေရန်နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်မျိုးစုံကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်သို့ပေါင်းစည်းရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယူအေအီးစီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များကိုတော်လှန်ရန်ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ 24, 2021 အောက်တိုဘာလ 25, 2021 9.6
Coinjoss သည်သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ cryptocurrencies ကိုစီမံရာတွင်ချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Coinjoss သည်လျင်မြန်စွာလဲလှယ်နိုင်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားဖြင့်သူတို့၏ cryptocurrencies ကိုရောင်းဝယ်ရန်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော interface ကိုအာရုံစိုက်သည်။ အောက်တိုဘာလ 15, 2021 နိုဝင်ဘာလ 30, 2021 9.6
Nexxus Rewards သည်ရပ်ရွာတစ်ခုလုံးကိုမြှင့်တင်ပေးသောထူးခြားသောလူမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစျေးကွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ဒေသခံပရဟိတအဖွဲ့များနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများအားသူတို့၏အရေးကြီးသောလူမှုရေးအကြောင်းများကိုစျေး ၀ ယ်သောစျေး ၀ ယ်များမှအပတ်တိုင်းသူတို့၏ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ငွေထည့်လေ့ရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 ဇန်နဝါရီလ 22, 2020 7.8
2local သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ရာသီဥတု၊ မျှတသောအလုပ်နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ဤသို့ဖြင့် 2local သည်ကုလသမဂ္ဂ၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပြုမှုအသစ်တစ်ခုကိုကူညီလိုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, action ကိုလူတိုင်းကလိုအပ်တယ်! အောက်တိုဘာလ 17, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2019 9.9
Encores သည်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏ဝင်ငွေစီး ၀ င်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းလဲစေပြီးအင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ လူမှုရေးကွန်ယက်၊ ကြော်ငြာစသည့်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်ဆုချခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူများအကြားအကျိုးကျေးဇူးများပြန်လည်ခွဲဝေပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ 1, 2019 မေလ 31, 2019 7.5
Robinhood ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ နောက်ကျောလောင်းကစားသို့ယုံကြည်မှုချပြီး။ စက်တင်ဘာလ 14, 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2020 8.9
Flas Exchange သည်ကျယ်ပြန့်သည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်တီထွင်ထားသောလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အဆင့်မြင့်သောဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေနှင့် Flas Exchange သည်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကိုတီထွင်လိမ့်မည်။ နိုဝင်ဘာလ 8, 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2020 8.3
GRAYLL သည်ဖြန့်ဝေပေးသော Ledger နည်းပညာ၊ AI နှင့် Machine Learning တို့ကိုရိုးရှင်းသော user friendly mobile & web App မှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအလိုအလျှောက်အကျိုးခံစားခွင့်များဖန်တီးပေးသော algorithmic ဘဏ္systemာရေးစနစ်တွင်အသုံးချသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် tokenized ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်များကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကုန်စည်များ၊ အနုပညာ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ မိုးလေဝသတိုင်းတာမှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းကြောင်းအချက်အလက်များစသဖြင့်မည်သည့်စနစ်ကိုမဆိုအသုံးချနိုင်သည်။ ဇူလိုင်လ 1, 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2020 9.1
HiveNet သည်ဖြန့်ဝေထားသော cloud တွက်ချက်ခြင်းကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ဤပျင်းရိသောကွန်ပျူတာအချိန်များကိုအသုံးချရန်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်များအား၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများအားလပ်ချိန်များမှအကျိုးအမြတ်ရစေသည် စက်တင်ဘာလ 24, 2019 နိုဝင်ဘာလ 23, 2019 7.9
Mindsync သည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်သင်ယူလေ့လာသူများ၊ ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် AI ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ ဤအသိုင်းအဝိုင်းသည်ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းရန်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့များအကြားပြိုင်ပွဲများတွင်ပူးပေါင်းနိုင်လိမ့်မည်။ မတ်လ 1, 2019 ဧပြီလ 30, 2021 10.8
Pawtocol LLC, Delaware ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီ (“ Pawtocol”,“ we”,“ our”,“ us”) သည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို blockchain ခေတ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုအဓိကထားသည့်စီးပွားရေးနှင့်ဂေဟစနစ်တစ်ခုအားပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤစာတမ်းသည် Pawtocol ၏နောက်ကွယ်မှကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်နှင့်ဒဿနကိုဖော်ပြပြီးငါတို့သည်ဤပရောဂျက်ကိုဘာကြောင့်စျေးကွက်ထဲသို့သယ်ဆောင်လာရသနည်း၊ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကွပ်မျက်ရန်လက်ျာအဖွဲ့ကအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ 1, 2018 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2018 7.9
SynchroBit ™သည်SynchroSphere®ဂေဟစနစ်၏ဘဏ္moduleာရေး module ၏အဓိကပရောဂျက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အခြားစီမံကိန်းများနှင့်ဂေဟစနစ်၏စီးပွားရေးကျောရိုးများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ချောမွေ့သောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်နှင့် blockchain နည်းပညာနှင့် cryptocurrencies ကို အခြေခံ၍ အလွန်အကျိုးရှိသော၊ တိကျသေချာသောလုံခြုံသောစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးပြုသူများအား platform သည်SynchroSphere®၏အခြားငွေကြေးပလက်ဖောင်းများနှင့်အပြည့်အ ၀ ပေါင်းစပ်လိမ့်မည်။ သြဂုတ်လ 1, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2019 8.2
TecraCoin အနာဂတ်တွင် Tecra ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီစဉ်သည်။ TecraCoin သည်ဤအစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလ 17, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 7.2
CoinCasso ပရောဂျက်သည်ပြည်သူအတွက်ဖန်တီးထားသောအလုံးစုံနှင့်ဒီမိုကရေစီအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်သည်အသိုင်းအဝိုင်းကကျွန်ုပ်တို့၏လဲလှယ်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနှင့်လွှမ်းမိုးမှုရှိစေလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအား CoinCasso ပရောဂျက်၏ပူးတွဲပိုင်ရှင်များဖြစ်လာရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အောက်တိုဘာလ 21, 2018 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2019 8.2
Karuschain ပရောဂျက်သည်လက်ရှိအဖိုးတန်သတ္တုထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်၏အဓိကသွင်းအားစုများနှင့်ရလဒ်များကိုထိရန်ရည်ရွယ်သည်။ Karuschain ပလက်ဖောင်းသည်အဖိုးတန်သတ္တုပစ္စည်းများထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်ပါဝင်သူအားလုံးရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုလျော့ပါးစေရန်တီထွင်နေသည်။ ဇန်နဝါရီလ 14, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2020 7.2
Level01 သည် Blockchain တွင် Artificial Intelligence (AI) ကုန်သွယ်မှုနည်းပညာနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုနည်းပညာနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးမျိုးတူချင်းတူ (P1P) ဆင်းသက်လာသောဖလှယ်မှုများဖြစ်သည်။ Level2 သည် forex၊ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် cryptocurrencies ကိုငွေကြေးကြားခံပွဲစားတစ်ခုမလိုဘဲ peer-to-peer ကို အခြေခံ၍ peer-to-peer ကို အခြေခံ၍ ကောက်ယူနိုင်သည်။ ဇူလိုင်လ 1, 2018 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2018 9.1
SaTT သည်ကြော်ငြာနှင့်ပရိသတ်ငွေပေးချေမှုကိုခွင့်ပြုသော blockchain နည်းပညာကိုအခြေခံသောအသုံးဝင်သောတိုကင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ SaTT ကို Ethereum blockchain တွင်လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားသောအချက်အလက်အားလုံးပါ ၀ င်သောကြော်ငြာများပါ ၀ င်သော Smart Contract တစ်ခုဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ Smart Contract သည်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အခြေအနေများ၊ အောင်မြင်မှုပမာဏနှင့်နောက်ဆုံး renumeration ကိုအာမခံသည်။ မေလ 1, 2018 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2020 8.3
Gath3r သည်ပေါင်းစည်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်အတူဘက်စုံသုံးဇာတိအကြွေစေ့ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် browser အတွင်းတူးဖော်မှုနည်းလမ်းသစ်ကိုလက်ခံသည်။ GTH အကြွေစေ့သည် browser များနှင့် app နှစ်ခုလုံးနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် UI ပြဿနာမရှိသောကြောင့် Gath3r's hashrate ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 ဇန်နဝါရီလ 11, 2020 6.3
Bethereum ဖြေရှင်းချက်သည်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အပွင့်လင်းဆုံးလောင်းကစားအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန် Blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူမရှိပါ စမတ်စာချုပ်များသည်ရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်ပေးပြီးလောင်းကစားအခြေအနေများနှင့်ရလဒ်များပေါ် မူတည်၍ အနိုင်ရရှိမှုများကိုအလိုအလျောက်ဖြန့်ဝေသည်။ အောက်တိုဘာလ 1, 2018 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2018 8.4
IBNIF CINEMADROM - ဒါကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ အထူးပြုတွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာအသစ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအခြေခံတွေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ International Blockchain Network of Independent Cinematographers တွေပါ။ ၎င်း၏အခြေခံတွင် IBNIF CINEMADROM သည် blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2020 ဧပြီလ 30, 2020 6.9
MyTVchain သည်အားကစားကလပ်များနှင့်အားကစားသမားများအတွက်ရည်စူးသောပထမဆုံး web TV ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးယခုအခါ Sport En France web TV channel ဖြစ်သော The Sports Movement ရုပ်မြင်သံကြားကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေငြာသည်။ ဒီရုပ်သံလိုင်းကိုပြင်သစ်အမျိုးသားအိုလံပစ်နှင့်အားကစားကော်မတီ (CNOSF) ၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ကဏ္inesအားလုံး၊ အဖွဲ့ချုပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ကလပ်များအားလုံးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်စူးသည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 29, 2020 မတ်လ 27, 2020 6.1
BILLCRYPT pl သည် Blockchain ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ (BR) အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောပေါင်းစည်းမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ blockchain (DApp) တွင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော applications များပုံစံဖြင့် Blockchain ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကို စုစည်း၍ ဘက်စုံသုံးအခြေခံအဆောက်အ ဦ တစ်ခုတည်း။ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့် virtual အာကာသ၊ အကျွမ်းတဝင်ရှိသောအင်တာနက်နှင့် blockchain တို့ကိုပေါင်းစည်းပေးသောထူးခြားသောပလက်ဖောင်း ဇူလိုင်လ 3, 2019 ဧပြီလ 23, 2020 7.4
သင်၏ ICO ကို စာရင်းပြုစုလိုပါသလား။
သင့်ရဲ့ ICO စာရင်းပြုစုပါ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထောင်ပေါင်းများစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရောက်ရှိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းနှင့် ပရိုမိုးရှင်းပက်ကေ့ဂျ်များကို နှိပ်၍ စစ်ဆေးပါ။ ICO တင်ပါ ခလုတ်ကို။
အွန်လိုင်းစာရင်း ICO ဆိုတာဘာလဲ။
ICO Listing Online သည်လူအများ ICOs စာရင်းကိုလာရောက်လာကြသည့်ဒေသများဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ် ICOs များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုအသစ်ပြုလုပ်နေသည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရနိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစာရင်း ICO အမြောက်အများရှိသော်လည်းအများစုမှာပုံမှန်မွမ်းမံထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိပေ။
ICOs များတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ICO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အကောင်းဆုံး Active၊ Pre & ရှာဖွေရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ လာမည့် ICO များ.
တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ တိုကင်အရောင်းအ ၀ ယ်” သို့မဟုတ်“ ကန ဦး တိုကင်ရာပူဇော်သက္ကာ” ဟုလည်းခေါ်ကြသောအိုင်စီအိုအိုင် (Initial Coin Offering) သည်အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား cryptocurrency သို့မဟုတ် token ကမ်းလှမ်းထားသည့် blockchain စီမံကိန်းများအတွက်ငွေကြေးစုဆောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်သည်၊ ထိုကဲ့သို့သောဖလှယ်မှုအဖြစ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုမီစီမံကိန်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုရန်အကြံပေးသည်။ ၎င်းတွင် whitepaper ကိုဖတ်ခြင်း၊ ICO သည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတန်ဖိုးကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းရှိမရှိလေ့လာခြင်းနှင့်အဖွဲ့အားအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ICO တစ်ခုတွင်သင်မည်သို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုဤတွင်ကြည့်ပါ။
ICO သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအဖြစ်လက်ခံသောသက်ဆိုင်ရာ cryptocurrency ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သည် ICO တိုကင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
တရား ၀ င်ရင်းမြစ်မှသိုက်လိပ်စာကိုသုံးကြိမ်စစ်ဆေးပါ။
ICO Soft Cap ဆိုတာဘာလဲ။
ပျော့ပျောင်းသော ဦး ထုပ်ကိုရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ICO တစ်ခုသည်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ပျော့ပျောင်းသော ဦး ထုပ်သည်စီမံကိန်းအတွက်ရှေ့ဆက်ရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။
ICO Hard Cap ဆိုတာဘာလဲ။
ICOs အများစုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်အများဆုံးလက်ခံနိုင်သည့်အခက်အခဲရှိသည်။ အကယ်၍ ICO တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်း၏ပျော့ပျောင်းသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန်ပျက်ကွက်ပါက ICOs အများစုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံရန်ပုံငွေများကိုပြန်ပို့လိမ့်မည်။
တိုကင်များကိုအိုင်အက်စ်အိုင်များမှတဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့သောကုမ္ပဏီသို့ထုတ်ပေးသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဒင်္ဂါးများကဲ့သို့တူညီသောအင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည့်စီမံကိန်းဂေဟစနစ်တွင်ငွေပေးချေမှုကိရိယာ (ငွေကြေးယူနစ်) ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏ပိုင်ရှင်သည်ကွန်ယက်တွင်အခြားအခွင့်အရေးများလည်းရှိသည်။ မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ ခွဲဝေပိုင်ခွင့်၊ ၀ င်ငွေတစ်ပိုင်းကိုရပိုင်ခွင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ တိုကင်များကို Ethereum သို့မဟုတ် Wave blockchain ကွန်ယက်ကို အခြေခံ၍“ စမတ်” စာချုပ်များအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ တိုကင်များကိုဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများ (သို့) ကုန်ကြမ်း (သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ) အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီးတိုကင်ပိုင်ရှင် (utilities) ၏ cryptocurrency ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ICO Whitepaper ဆိုတာဘာလဲ။
ICO Whitepaper သည်စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်တိုကင်များကိုထုတ်ပေးသောအဖွဲ့အစည်း / ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပေးသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ whitepaper တစ်လုံးနှင့်ကိုက်ညီရမည့်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာနှင့်အခြေအနေများမရှိပါ။ စာရွက်စာတမ်းတွင်များသောအားဖြင့်တိုကင်များကိုထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့်စီမံကိန်းနှင့်စီမံကိန်းနောက်ကွယ်မှအဖွဲ့အကြောင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
ကန ဦး အကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းခြင်း (ICO) မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
ICO တစ်ခုသည်စီမံကိန်းအသေးစိတ်၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ဒင်္ဂါးများသို့မဟုတ်တိုကင်များကိုမည်သို့ဖြန့်ဖြူးမည်ကိုဆွေးနွေးသည့်အဖြူရောင်စက္ကူဟုခေါ်သောဖော်ပြချက်အချို့ဖြင့်စတင်သည်။ (များသောအားဖြင့်တိုကင်များသည်စီမံကိန်းတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုယ်စားပြုရန်သို့မဟုတ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့အစည်းအားထုတ်ပေးသော်လည်းဒင်္ဂါးများသည်ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ )
ICOs အများစုသည်ရောင်းချခြင်းမပြုမီကမ်းလှမ်းသောတိုကင်သို့မဟုတ်ဒင်္ဂါးအရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အစောပိုင်းက ၀ ယ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အကြွေစေ့တစ်ခုအတွက်စျေးနှုန်းလျှော့။ သက်သာခွင့်ကိုပေးသည်။ ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းတွေကအတက်အကျရှိတယ်၊ လူတွေများများဝယ်လာရင်တိုကင်နည်းနည်းပဲတက်နိုင်တယ်။
အချို့သော ICOs များသည်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအတွက်သီးခြားရည်ရွယ်ချက်များရှိပြီး၎င်းတို့အားရောင်းချခြင်းတစ်လျှောက်လုံးစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ အခြားသူများကမူထောက်ပံ့ရေးကိုအမြဲတမ်းထားရှိပြီး ၀ ယ်လိုအားပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းကိုချိန်ညှိသည်။ တတ်နိုင်သမျှများပြားလာသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က ၀ ယ်သည့်အခါအကြွေစေ့အသစ်တစ်ခုဖန်တီးသောအခါပြောင်းလဲမှုကိုပေးသောသူများလည်းရှိသည်။
များစွာသော ICOs များကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းတွင်ထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့ကစီမံသည်။ အကြောင်းမှာပိုမိုစိတ်ချရသောကမ်းလှမ်းမှုကိုများသောအားဖြင့်လဲလှယ်သူသို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူ ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလိမ်လည်သူများကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံများခွင့်ပြုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ICO နှင့် IPO အကြားအဓိကကွာခြားချက်
ကန ဦး အများပိုင်ပေးကမ်းခြင်း (IPO) သည် ICO နှင့်ဆင်တူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အစုရှယ်ယာများရရှိသည်။ ဤသည် ICO နှင့်ဆန့်ကျင်သည်, ဘဏ္financာရေးဝန်ကြီးများကဝယ်ယူစီးပွားဖြစ်တိုကင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လျှင်တန်ဖိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
ICOs အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်တန်ဖိုးတိုးလာသောအခါအမြတ်အစွန်းရရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် cryptocurrencies အသစ်များကိုဝယ်သည်။ ၎င်းသည်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်သူတို့ ၀ ယ်သည့်စတော့များတက်သောအခါအမြတ်ရသူတစ် ဦး နှင့်ဆင်တူသည်။ ICO သည်စတော့ဈေးကွက်တွင်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကတိုကင်အသစ်ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမျှဝေမရနိုင်ပါ။
ဘာကြောင့် ICO crowdfunding ကိုလူကြိုက်များတာလဲ။
ICO သည်ဒစ်ဂျစ်တယ် crypto ဗားရှင်းအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်သည်။ ၎င်းသည် cryptocurrencies ကိုရန်ပုံငွေအဖြစ်ထိရောက်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်အောင်မြင်မှုရှိပြီးစံချိန်မှီရန်ပုံငွေဖြင့်မည်သည့်အခါမျှလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောရန်ပုံငွေအမြောက်အမြားတိုးပွားလာသည်။ Stratis, Ethereum, Iota, Viberate & Edgeless: အောင်မြင်သော ICO ပူးပေါင်းစီမံကိန်းများဥပမာအချို့ကိုဖော်ပြသည်။
ICO မှတစ်ဆင့်ရန်ပုံငွေများရှာဖွေလိုသော Crypto-ငွေကြေးကုမ္ပဏီများသည်စီမံကိန်း၏ဖော်ပြချက်၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လိုအပ်ချက်များ၊ ကုမ္ပဏီ၏စောင့်ရှောက်မည့်တိုကင်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အချိန်အပိုင်းအခြားအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်အချို့ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ICO စီမံကိန်းနှင့်စီမံကိန်းမှလက်ခံသည့် virtual ငွေကြေးအမျိုးအစား။
အဓိကကတော့မင်းဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြံအစည်ထဲကိုပိုက်ဆံတွေထည့်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပါပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, cryptocurrency ၏နယ်ပယ်ယခုမြင့်တက်နေသည်။ ဤသည်မှာဝင်ငွေအမြောက်အမြားအတွက်အလားအလာကောင်းသည့်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယနေ့အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွှတ်မခံလိုပါက
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ICO ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည် cryptocurrency စာရင်းရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ICO တစ်ခုတွင် cryptocurrency အသစ်တစ်ခုကိုတတ်နိုင်သမျှစောစောစီးစီး ၀ ယ်ယူသောကျွမ်းကျင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည့်တန်ဖိုးကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Ethereum ICO တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အမြတ်များစွာရရှိခဲ့သည်။ ၄၂ ရက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အီတာကို ICO တွင် ၃၀ ဆင့်ဖြင့်ကုန်သွယ်ခဲ့သည်။ စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ပထမဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့သော်လည်းပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ရာနှုန်းပြည့်တိုးတက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ Ethereum ၏ cryptocurrency Ether သည်တတိယအင်အားအရှိဆုံးသောဒင်္ဂါးပြားဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။
ICOs ကိုသုတေသနပြုသူမည်သူမဆို Blockchain နည်းပညာ၏အသုံးချနိုင်သောအလားအလာများစွာကိုလေ့လာလိမ့်မည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် crypto-business ရှုခင်း၏ဒီဇိုင်းကိုလွှမ်းမိုးသည်
ICOs တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်
လိမ်လည်မှုအမှုများသည် ICOs တွင်ပါ ၀ င်မှုသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်
တစ် ဦး ကပိုက်ဆံအိတ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိဝက်ဝံဈေးကွက်တွင် Startup များသည်မိမိကိုယ်ကိုတည်ထောင်ရန်ခက်ခဲသည်
သင် ICO တွင်မည်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ICO တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင်ရန်ပုံငွေလိုအပ်သောအလားအလာရှိသောအလားအလာရှိသောစီမံကိန်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို scroll လုပ်ရမည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုမြင်နိုင်မည့်စီမံကိန်းများစာရင်းကိုသင်တွေ့ရှိပါက၎င်းတိုကင်များကို ၀ ယ်ရန်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
ICO သည် Fiat ငွေကြေးများနှင့်မဟုတ်ဘဲ cryptocurrencies တွင်ဖော်ပြထားသည်ကို ထောက်၍၊ cryptocurrency (အဓိကအားဖြင့် Etherium) အတွက်ငွေလဲလှယ်ရန်လိုအပ်သည်။
Cryptocurrency ကိုစီမံကိန်းသို့လွှဲပြောင်းပြီးပါ ၀ င်မှုအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပါ
ဒင်္ဂါးပြားများ၏ crypto လဲလှယ်ဖို့ဆုတ်ခွာ
ICO ရောင်းချမှုအဆင့်များတွင်ရန်ပုံငွေများရှာဖွေခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဈေးကွက်တွင်ထုတ်ပေးသည့်အခါ blockchains များအဖြစ်နှင့်ရှယ်ယာများနှင့်ဆင်တူသည့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကို ico cryptocurrency list အတွက်လဲလှယ်နိုင်သည်။ အထူးစီမံကိန်းတစ်ခုစတင်စဉ်ကအစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုပေး ထိပ်တန်း ico စာရင်း။ ဤတွင် ICO ရောင်းရန်အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။
phase ငါ ပုဂ္ဂလိကရောင်းချမှု
phase II ကို ပစ္စုပ္ပန်
အဆင့် III ကို လူစုလူဝေးရောင်းချခြင်း
သို့သော်ပူပြင်းနေသော crypto ico ကြီးထွားမှု၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဆုံးဖြတ်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိပါ။ ပထမ၊ အဆင့် (၁) တွင် ကြိုတင်၍ ရောင်းချခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကရောင်းချမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့နောက်အဆင့် (၂) သည်အဓိကစာရင်းများကိုစတင်ဖလှယ်သည်။ ထို့နောက်အဆင့် (၃) တွင်လူအများက ၀ င်ငွေပိုမိုရရန်အများပြည်သူဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
အကောင်းဆုံးလာမည့် ICO စာရင်း -
ကျနော်တို့အနေနဲ့ပြီ လာမည့် ICO ရဲ့စာရင်း အရာမကြာမီတက်ကြွလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်လာမည့် ICOs များကိုပြသရန်အခြားအပိုင်းရှိသည်။
Active ICOs များစာရင်း -
အကောင်းဆုံး ICOs များစာရင်းကိုရှာဖွေရန်၊ အမျိုးမျိုးသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုယခုသင်သွားစရာမလိုတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏမွမ်းမံထားသောစာရင်းကိုပေးသည်။
ICO အကြိုစာရင်း -
Pre-ICO များသည်စျေးသက်သက်သာသာသာရှိသဖြင့်အမြတ်အမြတ်ပိုမိုရရှိရန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာသူတို့ဟာဝင်ငွေပိုရဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအကြားမှာရေပန်းစားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကြည့်ပါ ICO အကြိုစာရင်း ယနေ့။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သင်၏ ICO ကို စာရင်းပြုစုပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာထံရောက်ရှိကာ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ICO အတွက် အမြန်ဆုံး KYC ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကို ယနေ့ဖြည့်သွင်းပြီး နောက် 24 နာရီအတွင်း သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။